I-Skateboarder Isisindo sokuQeqesha ukuSebenza rhoqo
Ukunyusa ukuqeqeshwa kokuqeqeshwa kwabasebenzi be-Skateboarders
I-Skateboarding yindlela efanelekileyo kakhulu yokuzilolonga ngokuzodwa, kodwa ngamanye amaxesha ufuna ukusebenzela nokwakha izihlunu ukuze uzenzele i-skater enamandla, esheshayo nangakumbi! Ezi zinto zingasetyenziselwa ukukunceda ugcine umgca wakho webhola ebusika okanye xa ukalimele kwaye ungeke ukwazi ukukhwela, okanye ungayisebenzisa ukuze wakhe umzimba wakho kwaye uzienze ube ngumatshini onamandla, onobungozi we- skateboarding !
Ezi zinto zivela ekuthethaneni nabaqeqeshi abahlukahlukeneyo kunye neengcali ze -skaters , amava am, kunye nokusebenza kwinqaku leMagazini ye-Men's Health malunga ne-skateboardser work out routines. Ngoku unokufumana ulwazi, ukhululekile!
I-Skateboardser Ukusebenza rhoqo -Inkunzi iphakamisa
Inkunzi iphakamisa. I-Thinkstock / Getty Izithombe
Amathole akho ayimisipha emva kwemilenze yakho ephantsi, phantsi kwamadolo akho.
Fumana ibloko leenkuni, okanye isinyathelo, kwaye umele kunye nezwane zakho ezisezantsi kunye nezithende zakho zixhomekeke kwicala (khangela umfanekiso ukuze ubone oko ndithethayo). Ziphakamise kwizwane zakho ezinzantya ngokuphakamileyo njengoko unako, uze uzenzele phantsi uze ude udibanise izithende zakho ukuba uzivumele ukuba zihambe. Yenza le 10 ukuya kuma-20 amaxesha, phumla ngomzuzu okanye njalo, yenze kwakhona. Emva koko, elinye ixesha, kwiisethi ezingama-3.
Ukuba awuzange wenze oko ngaphambili, mhlawumbi awuyi kuziva buhlungu ngoko, kodwa ngosuku olulandelayo unokuba lukhuni! Ukuba kunjalo, yenza okungakumbi!
Njengoko uqina ngakumbi, unako ukubamba iinqwelwe ngelixa wenza ithole lakho liphakamisa. Iimilo ziya kuba nomshini onokuzisebenzisa.
I-SkateboardserWorkout Routine - I-Press Press
I-Press Press. I-medioimages / iPhotodisc / Getty Izithombe
Imishini yokunyusa imilenze isebenze imilenze ngokubanzi kwaye kufuneka ikunike amandla amaninzi kunye nesigxina sokwenza i-skating.
Imishini yokunyathela imilenze, kuya kufuneka usebenzise umshini wokushiya umlenze. Hlala kuyo, njengomfanekiso ukuya kwicala. Beka iinyawo zakho phezulu kwinqanaba leenyawo kunye neenyawo zakho malunga nobubanzi bomda. Lungisa iplati ukwenzela ukuba amadolo akho athande nge-angle-degree. Beka isisindo kwindawo elula, into efana ne-10 okanye i-20. Emva koko uze uphendule uze ulungise imilenze yakho, kodwa ungayitshizi amadolo akho. Yenza oku ngamaxesha ambalwa, ubone indlela enzima ngayo. Lungisa ubunzima, wenze okungaphezulu. Ufuna ukufika kwinqanaba lokuba ukwenza u-15 ngokulandelana kuyothathaka, kodwa kungenzi buhlungu. Emva koko yenza ezimbini iiseti ezili-15.
I-Skateboarder UkuSebenza rhoqo - Ulungiso lwemiLungelo
Ukwandiswa Kwemiyalelo. I-Stockbyte / Getty Izithombe
Lo ngumnye umziselo owufuna umzovo. Iza kusebenza ii-quads zakho - ezo ziyi-muscle ezinkulu phambi kwemilenze yakho, ngaphaya kwamadolo (phambi kwamathanga akho).
Uza kufuna umatshini njengowesithombeni. Hlala kuyo, kwaye uvale amaqatha akho emva kweepads. Ukwandisa umlenze, ukhaba iinyawo zakho kude kube yimilenze yakho iqonde. Lungisa ubunzima ngendlela oyenzayo kumaphephandaba omlenze - qala ngesixa esincinci, kwaye usebenze kude kube neengcamango ezintle zokwenza okungakanani. Kwakhona, iinjongo zakho zi-3 iiseti zokuphindaphinda ezili-15.
Kuzo zonke izi qeqesho zoqeqesho, ungenza isisindo esiphezulu kunye nokuphindaphindiweyo okumbalwa, ukuba ufuna ukwakha amandla kuphela. Ukwenza i-15 reps kunokunceda ukunyamezela, okuqhelekileyo oko ufuna ukukhwela.
I-Skateboardser Workout Ixesha eliqhelekileyo - Iintonga
Iinqununu. John Giustina / Getty Izithombe
Uninzi lwe-weightlifters uyayihoxisa i-abs, kodwa ukuba ufuna amandla okwenene kunye nesigxina, uFUNA umongo onamandla!
Ngeenkwenkwezi, zibeka emhlane wakho, amadolo aphelile, ngezandla zakho emva kwekhanda lakho (njengokuba uzimisele ukwenza indawo, kodwa kungekho mntu ubambe iinyawo zakho phantsi). Emva koko yiphakamise intloko kunye neenyawo zakho, uthabathe izibonda zakho emadolweni, uguqule ngokukhawuleza, uze ukhululeke kwakhona. Ngaba u-15 okanye 20, phumla, wenze ezinye iiseti ezimbini ezifanayo.
Kukho amaxesha amaninzi oomatshini ongawasebenzisa kwiimpawu. Ukuba sele usesidleleni sokuzivocavoca kwezinye izinto zokusebenza, khangela kwaye ukhangele ukuba kukho umatshini wokuba ungasisebenzisi.
I-Skateboardser Workout Ixesha eliqhelekileyo - Ukuchonga kunye ne-Excercise
Ukuchonga kunye neNgcaciso. Nick Dolding / Getty Izithombe
Ukubamba emva kokuba usebenze kubaluleke kakhulu. Kuya kukunceda ugweme umxube ekuphakanyiseni isisindo, kunye nokukhwela.
Yolula iqela lomzimba ngamnye oye wawusebenzisa, ubambe isalula malunga nemizuzwana engama-30. Ukubhinqa ukuchukumisa iinzwane zakho, ukudonsa iinyawo zakho enye ngexesha eliya ngasempilweni yakho, kwaye welula imilenze yakho ngokubanzi njengoko unako konke ukulula.
Ukuzivocavoca, izinto ezifana nokugibela ibhayisikili (ngaphandle, okanye ibhayisikili elithunywayo kwindawo yokuzivocavoca), ukugijima okanye ukubhukuda konke kukuhle. Ukwenza nawaphi na oku kuya kukunika amandla kunye nokunyamezela kwi-skateboarding. Kwaye kunjalo!
Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe, khangela i- Skateboarding edibanisa kunye nokuzivocavoca .
I-Illustrated Javelin Throwing Technique
Imbali eDiweyo yeSprints kunye neeRelays
Iimvelaphi eziziwayo ezivela kwi-A ukuya kwiZ
Indlela yokugcoba i-Acrylic okanye iPrainting Oil
I-Alabama State University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Shavuot: "I-Torah njengotshisayo njengobusi"
Iiprogram ze-8 eziphezulu zamahhala ze-Biology Teachers
Iivesi zeBhayibhile ngeSihloko
Ngaba iMitshato yeZenzo zeNkolo?
Yintoni ongayenza Ukuba ufumana iTire eliThabileyo ngeSithuthuthu
Ngaba Abakholelwa KuThixo Abakholelwa KuThixo Bokuba Neemilinganiselo Zokuziphatha?
Umhlobo ka-Eddie Guerrero Wowesizwe - Abazalwana abane, izizukulwana ezintathu
Yiyiphi i-Olympic Distance Running?